कलेजको मनपरी (२०७४ माघ २३, मंगलवार)
बुटवल सुरुमा चै हाम्रो कलेज यस्तो छ, उस्तो छ भन्दै भर्ना लिन्छ । अनि सुरु हुन्छ लुट्ने प्रक्रिया ।
सुरुमै कपडाको सेट भन्दै आठ हजार रुपैया लिन्छ । कपडा चै दुइटा सर्ट, दुइटा पाइन्ट, कोट र हाफ स्विटर हुन्छ, जुन बाहिर बनाउने हो भने ४ हजार नि पर्दैन ।
पहिलो दुई चार हप्ता राम्ररी पढाइ नि हुन्छ । दुई हप्ता पढाएर टेस्ट लिन्छ । तर अर्को पटक चै टेस्ट लिदैन । सोच्दा हुन किन दुख गर्नु र ?
Pactical File कलेजले नै छाप्छ अनि किन्न लगाउछ, बाहिर १०० रुपैयाँ नपर्ने Practical file लाई कलेज फिसमा प्रति file ४०० रुपैयाँ जोडेर पठाउछ ।
अनि त्यसपछी First Terminal Exam आउँछ, तोकिएको पैसा नबुझाइ कुनैपनि हालतम Exam मा भाग लिन दिदैन । अझ भन्छ, विद्यार्थीको लागि लिएको परिक्षा हो !
फेरि अर्को Terminal Exam आउँछ अनि सुरु हुन्छ, यहि लुट्ने क्रम !
अनि HISSAN को Exam भन्दै छुट्टै पैसा तिराउछन, ६००, ७००, १००० सम्म कलेज हेरिकन !
१२ सक्कियो, अब कलेजको अन्तिम लुट्ने बेला आयो, अनि character certificate को लागि भन्दै ५ सय देखि - ३ हजार सम्म माग्छन् प्रति ब्यक्ती !
यतिको लुट देख्दा पनि मेरो, तिम्रो अनि हामी सबैको मुख बन्द छ ! 😌